Vidiyo: Atụmatụ Ọchụchọ Obodo bụ Igodo maka Branddị Ibu | Martech Zone
Edemede anyị mere na nso nso a 6 Isi okwu ugha gwara echiche na-ezighị ezi na azụmahịa mba ma ọ bụ nke mba ọzọ kwesịrị izere ịchọ mpaghara. Ọ bụghị naanị na nghọtahie, ọ bụ nnukwu ndudue. Mepụta usoro SEO nke na-eme ka ị nwee mpaghara nwere ike ịbụ obere asọmpi, chọọ obere akụrụngwa, ma bulie nloghachi gị niile. Na ọ dịghị ego gị ogo na-abụghị ala Keywords ma ọ bụ nkebi ahịrịokwu. Dị nnọọ iche, ogo ọma na mpaghara gị nwere ike ịme ka ọkwa gị na mba na mba ụwa.
VideoNkọwa meputara ihe omuma vidiyo a di egwu Balihoo, a na-eweta nke obodo ahịa akpaaka technology na ọrụ ka mba ụdị na obodo ahịa mkpa.
Nchọta ime obodo ejedebeghị na ndị na-abanye okwu gbasara ala na mpaghara ọchụchọ. Cheta na ọganiihu na nso nso a na algorithms ọchụchọ na-eji netwọkụ mmekọrịta gị iji bulie ma gosipụta nsonaazụ dị mkpa. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na imirikiti netwọkụ mmekọrịta gị dị n'akụkụ gị na mpaghara - yabụ n'ezie nsonaazụ azụmaahịa mpaghara ga-ebili n'elu. Ọbụghị naanị nke ahụ, na iji ma ọ bụ na-enweghị isiokwu mpaghara, Google na-eji ọnọdụ mpaghara gị iji dozie nsonaazụ ị na-enweta.
Tags: nyocha alalocalnchọta mpagharanjikarịcha ọchụchọ mpagharaObodo search optimiziationobodo seonjikarịchasearch engine njikarịchanjikarịcha ọchụchọA
Mee 11, 2012 na 10: 24 AM
Azụmaahịa nke ọ bụla kwesiri imecha profaịlụ ọchụchọ mpaghara. Ọ nwere ike inye aka melite ọhụhụ gị na njinchọ ọchụchọ ma nyere aka rụọ pọtụfoliyo njikọ. Naanị n'ihi na ị na-egboro ndị na-ege gị ntị mba apụtaghị na ị gaghị erite uru na profaịlụ na ndekọ aha ndị a. Ndị na-ege ntị na mpaghara na-ege ntị na-achọkwa gị.